စုပျအားကိုမခံနိုငျ – My Blog
သူငယျခငျြး ၃ယောကျ.. ဖွူဖှေး.. နှငျးအိ.. ကြျောကွီး.. တက်ကသိုလျ ပထမနှဈ စာမေးပှဲဖွပွေီးလို့ ၃ယောကျသား ပြျောပြျောပါးပါး ခြောငျးသာကို ခရီးထှကျကွတာပေါ့.. ခြောငျးသာရောကျတော့ တညျးခိုခနျးတခုမှာ ဖွူဖှေးနဲ့ နှငျးအိက တခနျး.. ကြျောကွီးက တယောကျထဲ တခနျးပေါ့… ညက အိပျရေးပကျြလာကွတာတော့ တညျးခိုခနျးရောကျတာနဲ့ တရေးတမော အိပျနှငျ့လိုကျကွတာပေါ့.. နပေူတာလညျး ပါတာပေါ့.. ညနကေမြှ ပြျောပြျောပါးပါး အုနျးရသေောကျကွ.. ပငျလယျထဲဆငျးပွီး ရဆေော့ကွတော့တာပေါ့…
အဲ့အခြိနျမှာ မတျောတဆ ဖွူဖှေးက ရမှေမျးသှားတာကို ကြျောကွီးနဲ့ နှငျးအိတို့ တှတေ့ော့ ဖွူဖှေးကို ကြျောကွီးက ရထေဲကနေ ပှပွေီ့း ကမျးစပျပျေါချေါလာရော.. အရေးပျေါကယျနညျးနဲ့ ကြျောကွီးက ပွုစုပေးလိုကျတာပေါ့… တျောသေးတာပေါ့.. ဖွူဖှေး ပုံမှနျအသကျပွနျရှုလာလို့.. အဲ့အခြိနျမှာ ကြျောကွီးရဲ့လကျက ဖွူဖှေးရဲ့ လုံးအိ နုထှားနတေဲ့ ရငျနှဈမှာပျေါမှာ.. ဖွူဖှေးက ရငျတှအေရမျးခုနျပွီး ကြျောကွီးရဲ့လကျကို မွနျမွနျဖယျခိုငျးလိုကျရော.. ဖွူဖှေးတယောကျ ရှကျသှားပွီး တညျးခိုခနျးကို ပွေးပွီး ပွနျသှားတော့တာပေါ့..။
ကြျောကွီးကလညျး အမှတျမထငျ တငျထားမိလိုကျတာကို ပွနျတှေးမိပွီး ရငျတှေ တဒိနျးဒိနျးနဲ့ပေါ့… ကြျောကွီးကတော့ ဘာပဲဖွဈဖွဈ ကံကောငျးတယျလို့ပဲ ဆိုရမလား… ဖွူဖှေးရော နှငျးအိရော ၂ယောကျလုံးက လုံးဝအခြောအလှတှေ.. စကားပွောရငျ ပွုံးလိုကျရငျ အရမျးခဈြဖို့ကောငျးတဲ့သူတှေ.. ခန်ဓာကိုယျက သေးသေးသှယျသှယျလေး.. လုံးဝနျးနတေဲ့ ရငျနှဈမှာက တီရှပျအကပျြလေးမြား ဝတျထားလိုကျရငျ စနနှေဈခိုငျ အပွိုငျတိုးထှကျနတော.. သူတို့ရဲ့ တငျပါးလေးတှကေလညျး နောကျကို ဖောငျးဖောငျးလေးတှေ ဖွဈနတေယျ.. လုံခညျြဝတျထားရငျ သိပျမသိသာဘူး..
ဂငျြးဘောငျးဘီအကပျြလေးမြား ဝတျထားလိုကျရငျ မွငျတဲ့သူတိုငျး နှဈခါပွနျ မကွညျ့ဘဲ မနနေိုငျအောငျကို လှကွတဲ့သူတို့နှဈယောကျ.. ကြျောကွီးလညျး အခနျးထဲ ပွနျရောကျပွီး ရခြေိုး အဝတျအစားလဲပွီးတဲ့အခြိနျ ဒေါကျ.. ဒေါကျ.. ဒေါကျ.. နဲ့ တံခါးမှာ လူတယောကျ.. ဖှငျ့ကွညျ့လိုကျတော့ နှငျးအိ.. ရစေိုစိုနဲ့.. “ဟာ.. နှငျးအိ.. ရမေခြိုးရသေးဘူးလား.. အအေးပတျကုနျမှာပေါ့..” “ဟိုဘကျအခနျးမှာ ဒျေါဖွူဖှေးတယောကျ မပွီးနိုငျသေးဘူးလေ.. ငါလညျး ခမျြးလာတာနဲ့ နငျပွီးလောကျပွီထကျပွီး နငျ့အခနျးထဲမှာ ရလောခြိုးမလို့.. ရမလား” “ရတာပေါ့.. လာ.. ” အဲ့လိုနဲ့ ကြျောကွီးရဲ့ အခနျးထဲမှာ နှငျးအိက ရခြေိုးဖွဈသှားတာပေါ့… တကယျတော့ နှငျးအိက ဇာတျလမျးရှာတာ.. ။
နှငျးအိက ကြျောကွီးကို ကွိုကျနတော.. ဒါပမေယျ့ ကြျောကွီးက ဖွူဖှေးကို ကွိုကျနရေော.. အဲ့ဒါကို နှငျးအိက ကြျောကွီးကို သူ့ဆီကို စိတျလညျလာအောငျဆိုတဲ့ ရညျရှယျခကျြနဲ့ ကြျောကွီးဆီမှာ ရလောခြိုးတာ.. နှငျးအိ ရခြေိုးပွီးလို့ အပွငျထှကျလာခါနီးမှာ ထမီကို လြော့လြော့လေး ဝတျထားခဲ့တာ.. ကြျောကွီးအရှကေို့ ရောကျရငျ ခြျောလဲအောငျ လုပျလိုကျပွီးရငျ သူရဲ့ နုနုထှားထှား ခန်ဓာကိုယျနဲ့ ကြျောကွီးကို အပိုငျကွံမယျဆိုတဲ့ ရညျရှယျခကျြနဲ့ပေါ့.. ခကျတာက သူလညျး ရခြေိုးခနျးထဲကနေ ထှကျလာရော.. ကြျောကွီးက အခနျးထဲမှာ မရှိတော့ဘူး.. နှငျးအိတို့ ၂ယောကျ နမေယျ့အခနျးထဲမှာ ကြျောကွီးက ဖွူဖှေးနဲ့ စကားပွောနကွေတာကို ကွားတော့ နှငျးအိခမြာ ဝမျးနညျးသှားရှာတယျ…. ကြျောကွီးကတော့ သူခဈြတဲ့ကောငျမလေး ဖွူဖှေးနဲ့ စကားစမွညျတှေ ပွောပွီး ပြျောနလေရေဲ့.. ။
အားလုံးအဝတျအစားတှလေဲပွီးတာနဲ့ ၃ယောကျသား ညစာအတူတူသှားစားကွတာပေါ့…. ညစာ စားပွီးတာနဲ့ ကမျးခွမှော မီးဖိုပွီး စကားတှေ ပွောကွ.. သောကျကွပေါ့.. ကြျောကွီးကတော့ အရကျလေးနဲ့.. ကနျြတဲ့ ၂ယောကျကတော့ ဝိုငျနဲ့ပေါ့.. ပြျောမွူးနလေိုကျကွတာ… ည အိပျခြိနျရောကျတော့ ကြျောကွီးက မူးနတေဲ့ ဖွူဖှေးနဲ့ နှငျးအိကို အခနျးထဲပို့ပေးပွီးတော့ သသေခြောခြာ အိပျယာပွငျဆငျပွီး ၂ယောကျလုံးကို အိပျယာပျေါ ခပြေးလိုကျတာပေါ့… ကြျောကွီးက ဖွူဖှေး အိပျနတောလေးကို ကွညျ့ပွီး စိတျက မရိုးမရှတှေ ဖွဈလာပွနျရော.. လကျတှကေ အငွိမျမနနေိုငျတော့ဘဲ ဖွူဖှေးရဲ့ ရငျနှဈမှာကို ပှတျနမေိလိုကျတယျ… အကငြ်္ီကွယျသီးကလညျး တလုံးက ပွုတျနတေော့ အကငြ်္ီကွားထဲ လကျထညျ့လိုကျတာနဲ့… အိုးးးး… အိနပေါ့လား.. ဆိုတဲ့အတှေး ကြျောကွီးဆီ ရောကျတာနဲ့ သူ့ရဲ့ လပွှတျဝမှာ လရညျတှကေ စို့လာ… အကငြ်္ီကွယျသီးကို မသိမသာခြှတျပေးပွီး ဖုံးကှယျနတေဲ့ နို့ ၂လုံးကို ဘျောလီကွားကနေ ထှကျလာအောငျ လုပျပွီးတာနဲ့.. ကြျောကွီးတယောကျ မကျြလုံးအတိုငျးသား ပွူးသှားပွီး.. ။
အိုးးး.. ရကျရကျစကျစကျ လှလှခညျြလား ဆိုပွီး နာမညျနဲ့လိုကျအောငျ ပနျးရောငျသနျးပွီး ဖွူဖှေးလုံးအိနတေဲ့ ဖွူဖှေးရဲ့ နို့တှကေို ကြျောကွီးတယောကျ လြှာနဲ့ လကျြပေးနမေိလိုကျတယျ ဘယျဘကျနို့ကို စို့ပေးလိုကျ.. ညာဘကျနို့ကို လကျမလေးနဲ့ ခလြေိုကျ လုပျပေးနတေယျ.. အဲ့လိုနဲ့ ညာဘကျလကျက ဖွူဖှေးရဲ့ အောကျကို ဆငျးသှားရငျး ဖွူဖှေးရဲ့ စောကျစိကို လိုကျစမျးတော့ ပါးလှာလှတဲ့ အတှငျးခံ ဘောငျးဘီလေးကို စ စမျးမိလိုကျတယျ… စောကျမှေးတှကေို အသာအယာပှတျပေးရငျး ဖွူဖှေးရဲ့ စောကျစိကို စမျးမိလိုကျတော့…
ဟငျးးးး အိနပွေနျပါရောလား.. ကြျောကွီးအနနေဲ့က တခါမှ အပွငျမှာ ကွုံဖူးတာ မဟုတျဘူး.. အမွဲတမျး အောကားတှပေဲ ကွညျ့.. ကိုယျ့ဘာသာကို ဂှငျးထုခဲ့တာ.. အခုတော့ အပွငျမှာ တကယျအကောငျအထညျ ဖျောမိပွီဆိုပွီး ရငျတှေ တလှပျလှပျနဲ့.. အဲ့လိုနဲ့ ဖွူဖှေးရဲ့ စောကျစိကို သခြောကိုငျပေးရငျး အကှဲကွောငျးတလြောကျကို ဖိကာ ပှတျမိနတေယျ… အရညျတှေ အရမျးရှဲပွီး ထှကျလာတာကို ကြျောကွီး စမျးမိလိုကျတယျ… ဖီးလျတကျနတေဲ့ကြျောကွီးက စိတျကို မထိနျးနိုငျတော့ဘဲ လကျခြောငျး တခြောငျးကို အထဲကို ထိုးထညျ့ကွညျ့မိလိုကျတယျ… ။
အဲ့အခြိနျ ဖွူဖှေးက အိပျနရေငျးကနေ အသိဝငျလာပွီး ရှစိရှစိတှေ ဖွဈလာပါလရေော… ထလိုကျတဲ့အခါကရြငျ ကြျောကွီးလညျး အရှကျရသှားမယျ အိပျနတေဲ့ နှငျးအိလညျး နိုးမှာစိုးရိမျတာနဲ့ မကျြလုံးမှိတျပွီးပဲ ငွိမျခံနလေိုကျတော့တယျ… ကြျောကွီးရဲ့ လကျကတော့ ဖွူဖှေးရဲ့ စောကျပေါကျဝထဲကို ထညျ့ပွီး မှပေေးနတေော့ ဖွူဖှေး နိုးနတောလား အိပျနတောလားဆိုတာကိုတောငျ မရိပျမိနိုငျ ဖွဈသှားလရေဲ့ ဖွူဖှေးကတော့ ပါးစပျကနတေော့ တအငျးအငျးးး ပေါ့.. ကြျောကွီးက ဖွူဖှေးရဲ့ လကျတဖကျကို ကိုငျပွီး သူ့ရဲ့ ထိုးထောငျထှကျနတေဲ့ လီးကို ဖွူဖှေးက လာကိုငျနတေယျဆိုတဲ့ အမှတျနဲ့ ပှတျပွီးကိုငျခိုငျးနတေယျ…
ဖွူဖှေးရဲ့ လကျက ကြျောကွီးရဲ့ လီးတံကို ကိုငျမိလိုကျတဲ့အခြိနျ ဖွူဖှေးက မနနေိုငျ မထိုငျနိုငျတှဖွေဈပွီး ဘာဆကျလုပျရမှနျး မသိတော့ဘူး… လှုပျလို့ကလညျး မရတာနဲ့ သူခိုငျးရာ လုပျနမေိပွီ… အဲ့လိုနဲ့ ကြျောကွီးက ဖွူဖှေးလကျကိုကိုငျပွီး သူ့လီးတံကို သူ ဂှငျးတိုကျနမေိလိုကျတာ တခြီပွီးသှားလရေဲ့.. ဒါပမေယျ့ သူ့ခမြာ စိတျက မကနြေပျနိုငျ.. ဖွူဖှေးရဲ့ အဖုတျလေးထဲကို ထညျ့ခငျြနခေဲ့တာ.. ဒါပမေယျ့လညျး ဖွူဖှေးကို ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးပွောပွီးမှပဲ ထညျ့တော့မယျဆိုပွီး ကြျောကွီး ကိုယျ့အခနျးထဲကိုယျ ပွနျသှားလရေဲ့.. ကြျောကွီး လုပျသှားတဲ့လုပျရပျ အကုနျလုံးကို နှငျးအိက အိပျခငျြယောငျဆောငျပွီးနလေိုကျတာ.. အကုနျမွငျ အကုနျကွားလိုကျရတော့ နှငျးအိရဲ့ အဖုတျမှာလညျး အရညျတှရှေဲလို့..။
ကြျောကွီး အခနျးအပွငျထှကျသှားပွီး သိပျမကွာဘူး နှငျးအိကလညျး အိပျနရောကနေ ထပွီး ကြျောကွီးနတေဲ့အခနျးကို လိုကျသှားဖွဈပွနျရော.. ကြျောကွီး တံခါးဖှငျ့ပေးတာနဲ့ နှငျးအိကလညျး အတငျးတိုးဝငျပွီး ကုတငျပျေါကို နှဈယောကျသား ပဈလှဲလိုကျကွတယျ… အဲ့အခြိနျ နှငျးအိက ကြျောကွီးရဲ့ လီးတံကို ဘောငျးဘီအပျေါကနေ ပှတျပေးနတေယျ… ကြျောကွီးက အံ့သွသှားပွီး… “နငျ ဒါ ဘာလုပျတာလဲ” လို့ မေးတော့ “ငါက နငျ့ကို ခဈြခငျြတာ.. နငျလညျး အရမျးလုပျခငျြနတေယျမလား.. ငါ အရမျးခဈြခငျြနတေယျဟာ..” ဆိုပွီး နှငျးအိက ပွနျပွောလိုကျရော.. အဲ့အခြိနျ ကြျောကွီးကလညျး သူ မူးနလေို့ ပွောတာ နမှောပါ.. ငါ အခုလုပျလိုကျရငျလညျး မနကျကရြငျ သူ မှတျမိခငျြမှ မှတျမိမှာ.. အခုလကျရှိ ငါ့လီးကလညျး တောငျနတေော့ အတျောပဲ.. ဆျောလိုကျအုံးမှ.. လို့ စဉျးစားပွီး ခြျောလဲရောထိုငျ လုပျမိလိုကျရော.. နှငျးအိက ကြျောကွီးရဲ့ ဘောငျးဘီအောကျက လီးတံကွီးကို ကိုငျပွီး အထကျအောကျ ပုံမှနျကစားပေးနတောပေါ့…
ကြျောကွီးကလညျး အရှိနျပွနျတကျလာတာနဲ့ ဘောငျးဘီကို ဖွုတျပေး ဇဈကို ဖွုတျပေးပွီး နှငျးအိရဲ့ လကျကို ကိုငျပွီး ကြျောကွီးရဲ့ လီးတံကွီးကို ကိုငျလို့အဆငျပွအေောငျ ထညျ့ပေးနေ၏… နှငျးအိကတော့ ပုံမှနျအတိုငျးပဲ လီးတံကွီးကို ကိုငျပွီး အပျေါအောကျ ဆှဲပေးလိုကျ ပှငျ့အာနတေဲ့ ဒဈကို ကိုငျလိုကျနဲ့ပေါ့… ကြျောကွီးကတော့ အေးဆေး ဇိမျခံနရေငျး နှငျးအိက ကြျောကွီးရဲ့ ခါးအောကျနားကို ဆငျးသှားပွီး ကြျောကွီးရဲ့ လီးတံကွီးကို ကွညျ့နလေေ၏.. အဲ့အခြိနျ နှငျးအိက သူ့ရဲ့ ပါးစပျနဲ့ ကြျောကွီးရဲ့ ဒဈကို ငုံလိုကျတဲ့အခြိနျ… ကြျောကွီးခမြာ ကွကျသီးဖငျြးဖငျြးထသှားပါလရေော…. တခါမှ မရဖူးတဲ့အရသာ.. တခါမှ မရဖူးတဲ့ခံစားခကျြမြိုး ရလိုကျတော့ ကြျောကွီးတယောကျ နတျပွညျရောကျသှားတဲ့အတိုငျးပဲ..။
ကြျောကွီးကတော့ ပါးစပျကနေ တရှူးရှူး… တရှူးရှူးနဲ့ပေါ့.. နှငျးအိကတော့ ကြျောကွီးရဲ့ လီးတံကွီးကို ပါးစပျထဲထညျ့လိုကျ.. ထုတျလိုကျ လုပျနတော.. လီးကို အရငျးက ကိုငျပွီး ရှတေို့းနောကျဆုတျ အားရပါးရလုပျပေးနသေညျ.. ဖငျကွားထဲတှငျ တှဲလောငျးကနြသေော လအုကို အသာအယာ သူမလကျနှငျ့ကိုငျပွီး အု ၂လုံးကို လကျထဲမှာ ဆုတျနယျကစား၍ နသေညျ.. ခဏအကွာမှာ လအုနှဈလုံးကို နှငျးအိက သူ့ပါးစပျထဲ ငုံထညျ့လိုကျတော့… အိုးးးး…. ကောငျးကငျဘုံသို့ ရောကျသှားသညျ့အလား… ကြျောကွီးတယောကျ တကိုယျလုံး တဖငျြးဖငျြးဖွဈလာပွီး လီးက ဆတျကနဲ ဆတျကနဲ အစှမျးကုနျတောငျသှားရာကနေ သုတျရညျတှေ သူမ ပါးစပျထဲ ပနျး၍ ထှကျသှားလသေညျ.. နှငျးအိတာဝနျကတြေော့ ကြျောကွီးက နှငျးအိကို သူ့အပျေါကနေ ဖယျ.. ပကျလကျလှနျခပြွီး နှငျးအိ ဝတျထားတဲ့ ထမီကို ဆှဲဖယျလိုကျတဲ့အခြိနျ.. နှငျးအိကလညျး အသငျ့ကားပေးထားတဲ့ ပေါငျမြားနဲ့အတူ စောကျဖုတျလေးပါ အသာပွဲ၍ ဟသှားလသေညျ.. ကွမျးရှရှ အမှေးလေးမြား အုပျဆိုငျးဆိုငျးဖွဈနသေော စောကျဖုတျလေးသညျ နူးညံ့လှနျးလှသညျ။
ဖိလိုကျရငျ နဈသှားပွီး ကွှလိုကျလြှငျလညျး ပွနျပွီး ဖောငျးလာသညျ။ ကွီးမားကားစှငျ့သော တငျပါးကွီးမြားကွောငျ့လညျး စောကျဖုတျလေးသညျ ကော့ကော့လေး မို့၍နသေညျ။ ကြျောကွီးက ခုနက ဖွူဖှေးရဲ့ စောကျဖုတျကို ကလိခဲ့ပမေယျ့လညျး ယခုလို သသေခြောခြာ မမွငျခဲ့ရ။ ထို့ကွောငျ့လညျး ကြျောကွီးရဲ့ နားထငျတှငျ သှေးတှကေ တဒိတျဒိတျခုနျ၍ လာရသညျ။ အမှေးကွမျးတှကွေားကနေ မာနသေော နှငျးအိရဲ့ စောကျဖုတျထဲ လကျခလယျကို စမျးပွီး ထိုးသှငျးလိုကျသညျ။ ခုနက ကြျောကွီးက ဖွူဖှေးကို လုပျပေးနတေဲ့အခြိနျ မွငျခဲ့ရတာတှကွေောငျ့ နှငျးအိရဲ့ စောကျဖုတျမှာ အရညျရှဲနသေဖွငျ့ နူးညံ့ခြောအိသော အသားစိုငျလေးမြားထဲသို့ လကျခလယျသညျ ရှောရှောရှုရှုဝငျ၍သှားသညျ။
ပူနှေး၍ နှဈသကျစရာ အရသာပငျဖွဈသညျ.. စောကျစိလေးကလညျး မာပွီး တောငျနလေသေညျ.. ထို့နောကျ အဖုတျထဲသို့ လကျခြောငျးသှငျးပွီး မှပေေးလိုကျပါတော့သညျ.. “အငျ့… ဟငျးးးး… ဟငျးးး… ကိုကြျော… အငျးးးး… အိုးးး… ဟငျးးးး…” နှငျးအိကလညျး အရှိနျတှတေကျပွီး ပေါငျကို အစှနျးကုနျဖွဲကားပေးလိုကျရာ အဖုတျကွီးက ပို၍ဖောငျးကားကာ ပွူးပွီးပျေါလှငျလာရသညျ.. “ဟငျ့… အငျ့… အငျ့… အငျ့…” ထူးခွားသော အရသာကွောငျ့ အငျ့ကနဲတှနျ့သှားပွီးမှ ဘာလုပျပေးရမယျဆိုတာကို သဘောပေါကျသှားပွီး သကျပွငျးမြားခလြိုကျသညျ .. “ပွှတျ.. ပလပျ.. ပွှတျ..” “အားးး… ရှီးးး… ပွှတျ.. ကြှတျ.. ကြှတျ..” စောကျစကျေု့ လြှာဖြားနဲ့ ကလိပေးလိုကျ စောကျခေါငျးထဲ လြှာထိုးထညျ့ပွီး မှပေေးလိုကျ.. အဖုတျတပွငျလုံး လြှာနဲ့သိမျးပွီး လကျြပေးလိုကျနဲ့ လုပျပေးနတေဲ့ ကြျောကွီရဲ့ လြှာဒဏျကွောငျ့ နှငျးအိတယောကျ တကိုယျလုံး တုနျခါနလေသေညျ.. ။
အရညျတှကေလညျး မရပျမနား ယိုစီးကလြာပွီး အိပျယာပျေါတှငျ အကှကျကွီးပငျ ဖွဈပျေါလာသညျ.. လြှာက စောကျစိကို စုပျပေးနသေလို.. လကျခြောငျးတှကေလညျး စောကျဖုတျထဲကို ထညျ့လိုကျ.. မှပေေးလိုကျ လုပျပေးနသေညျ.. ကြျောကွီးက အားသှနျခှနျစိုကျဖွငျ့ လုပျပေးလိုကျတော့ နှငျးအိတယောကျ ပွီး၍သှားသညျ.. ကြျောကွီးကတော့ အဆကျမပွတျ စောကျစိကို စုပျပေးလိုကျ စောကျခေါငျးထဲထညျ့လိုကျ…နဲ့ လုပျလိုကျရငျး နောကျထပျတကွိမျ ထပျပွီးသှားပွနျလသေညျ.. ဒီတကွိမျမှာတော့ ငယျသံပါအောငျ အျောရငျး လရညျဖွူတှကေိုပါ ထုတျလိုကျပါတော့သညျ..
ကြျောကွီးက အသငျ့ဖွဲထားတဲ့ နှငျးအိရဲ့ ပေါငျနှဈလုံးကွားသို့ ဝငျလိုကျပွီး စိနသေော စောကျဖုတျလေးကို လကျဖွငျ့အသာအယာဖွဲပွီး ဒဈဖြားဖွငျ့ စောကျဖုတျနှုတျခမျးသား တလြှောကျ ပှတျသပျပေးနရေငျး စိတျတှေ ထသထကျ ထလာအောငျ နှိုးဆှပေးနသေညျ… ထို့နောကျ ကြျောကွီး၏ ဧရာမလီးခြောငျးကွီးက စောကျခေါငျးထဲသို့ မဆနျ့မပွဲ ဝငျသှားရှာသညျ.. ကြျောကွီးရဲ့လကျက နှငျးအိရဲ့ လုံးအိနတေဲ့ နို့တှကေို ကိုငျရငျး စိတျကွှအောငျ ကစားပေးနမေိသညျ.. ကြျောကွီးရဲ့ လီးကွီးကလညျး လကျနဲ့အတငျး ညှဈညှဈထားသလို ခံစားနရေသညျ..။
ကြျောကွီးရဲ့ လီးတံကွီးက ထငျသလောကျ မဝငျသေး.. တခုခုခံနသေညျဟု ခံစားနရေသညျ.. အာာ.. အပြိုမွှေး.. ဟုတျပါသညျ.. နှငျးအိရော ဖွူဖှေးရော နှဈယောကျလုံး ပါကငျမဖောကျရသေးတဲ့ အပြိုလေးတှပေါ..ဲ့အခြိနျ ကြျောကွီးတယောကျ စိတျမထိနျးနိုငျဘဲ အတငျးဇှတျတိုးပွီး လီးတံ တဆုံး ထညျ့ပွီး ငွိမျနလေိုကျလသေညျ.. “အိုးးးး.. အာာာာ… ပွှတျ… ” လီးတံကွီးတခုလုံး နှေးနပေါရောလားး… ခဏကွာအောငျ အသှငျးအထုတျ ဖွေးဖွေးစီ လုပျပေးလိုကျမှ သူမ၏ စောကျပတျကွှကျသားလေးမြား တဖွေးဖွေး ပွလြှေော့၍ကလြာသညျ.. “ပွှတျ… အား…. အငျ့…. သိပျကောငျးတာပဲ… အားးး… ” အခုထိ ကောငျးနသေော နှငျးအိ၏ ခွထေောကျမြားကို ပခုံးပျေါ ထမျးတငျပွီး ရှကေို့ ငိုကျခလြိုကျပါသညျ.. ။
ခါးအောကျမှာ ခေါငျးအုံးတှေ ခံထားလိုကျတော့ နှငျးအိတယောကျ လီးရဲ့ ဆောငျ့ခကျြတိုငျးကို မလှဲနိုငျ မရှောငျနိုကျ ရကျရကျစကျစကျကို ခံနရေပါတယျ.. နှငျးအိခမြာ.. နှုတျခမျးကို ကိုကျပွီး လကျက မှယေ့ာကို ကုတျခွဈရငျး ခေါငျးကို ဘယျညာ ခါယမျး၍နလေသေညျ.. သူမ၏ ပေါငျအတှငျးသားတှေ တဆတျဆတျ တုနျခါ၍နသေလို နို့အုံတှကေလညျး ပွုတျထှကျမတတျ လှုပျရမျး၍နသေညျ.. စောကျခေါငျးထဲက ခြောအိအိအသားမြှငျမြားသညျ လီးကို စုပျယူ၍ နကွေသညျ.. နှငျးအိရဲ့ ခါးကို ကိုငျကိုငျပွီး ဆောငျ့ရာမှ စောကျဖုတျပါ အထဲကို ကြှံဝငျသှားသလား အောကျမရေ့အောငျ လအုတှပေငျ စောကျဖုတျနှုတျခမျးကွား ညပျညပျသှားလသေညျ.. မကွာခငျမှာပဲ.. ဗွုံးဆို ပွလြှေော့သှားပွီး အဖုတျတခုလုံး လရညျတှေ အိုငျထှနျးနတေော့သညျ.. ကြျောကွီးလညျး ရှဲနသေော စောကျခေါငျးထဲကို ဆယျခကျြလောကျ ဆကျဆောငျ့ရငျး စောကျပတျရဲ့ စုပျအားကို မခံနိုငျတော့ဘဲ သားအိမျနံရံကို သုတျရညျမြားဖွငျ့ တဖွနျးဖွနျး ပနျး၍ ပွီးသှားရပါတော့သညျ….။
သူငယ်ချင်း ၃ယောက်.. ဖြူဖွေး.. နှင်းအိ.. ကျော်ကြီး.. တက္ကသိုလ် ပထမနှစ် စာမေးပွဲဖြေပြီးလို့ ၃ယောက်သား ပျော်ပျော်ပါးပါး ချောင်းသာကို ခရီးထွက်ကြတာပေါ့.. ချောင်းသာရောက်တော့ တည်းခိုခန်းတခုမှာ ဖြူဖွေးနဲ့ နှင်းအိက တခန်း.. ကျော်ကြီးက တယောက်ထဲ တခန်းပေါ့… ညက အိပ်ရေးပျက်လာကြတာတော့ တည်းခိုခန်းရောက်တာနဲ့ တရေးတမော အိပ်နှင့်လိုက်ကြတာပေါ့.. နေပူတာလည်း ပါတာပေါ့.. ညနေကျမှ ပျော်ပျော်ပါးပါး အုန်းရေသောက်ကြ.. ပင်လယ်ထဲဆင်းပြီး ရေဆော့ကြတော့တာပေါ့…
အဲ့အချိန်မှာ မတော်တဆ ဖြူဖွေးက ရေမွမ်းသွားတာကို ကျော်ကြီးနဲ့ နှင်းအိတို့ တွေ့တော့ ဖြူဖွေးကို ကျော်ကြီးက ရေထဲကနေ ပွေ့ပြီး ကမ်းစပ်ပေါ်ခေါ်လာရော.. အရေးပေါ်ကယ်နည်းနဲ့ ကျော်ကြီးက ပြုစုပေးလိုက်တာပေါ့… တော်သေးတာပေါ့.. ဖြူဖွေး ပုံမှန်အသက်ပြန်ရှုလာလို့.. အဲ့အချိန်မှာ ကျော်ကြီးရဲ့လက်က ဖြူဖွေးရဲ့ လုံးအိ နုထွားနေတဲ့ ရင်နှစ်မွှာပေါ်မှာ.. ဖြူဖွေးက ရင်တွေအရမ်းခုန်ပြီး ကျော်ကြီးရဲ့လက်ကို မြန်မြန်ဖယ်ခိုင်းလိုက်ရော.. ဖြူဖွေးတယောက် ရှက်သွားပြီး တည်းခိုခန်းကို ပြေးပြီး ပြန်သွားတော့တာပေါ့..။
ကျော်ကြီးကလည်း အမှတ်မထင် တင်ထားမိလိုက်တာကို ပြန်တွေးမိပြီး ရင်တွေ တဒိန်းဒိန်းနဲ့ပေါ့… ကျော်ကြီးကတော့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကံကောင်းတယ်လို့ပဲ ဆိုရမလား… ဖြူဖွေးရော နှင်းအိရော ၂ယောက်လုံးက လုံးဝအချောအလှတွေ.. စကားပြောရင် ပြုံးလိုက်ရင် အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့သူတွေ.. ခန္ဓာကိုယ်က သေးသေးသွယ်သွယ်လေး.. လုံးဝန်းနေတဲ့ ရင်နှစ်မွှာက တီရှပ်အကျပ်လေးများ ဝတ်ထားလိုက်ရင် စနေနှစ်ခိုင် အပြိုင်တိုးထွက်နေတာ.. သူတို့ရဲ့ တင်ပါးလေးတွေကလည်း နောက်ကို ဖောင်းဖောင်းလေးတွေ ဖြစ်နေတယ်.. လုံချည်ဝတ်ထားရင် သိပ်မသိသာဘူး..
ဂျင်းဘောင်းဘီအကျပ်လေးများ ဝတ်ထားလိုက်ရင် မြင်တဲ့သူတိုင်း နှစ်ခါပြန် မကြည့်ဘဲ မနေနိုင်အောင်ကို လှကြတဲ့သူတို့နှစ်ယောက်.. ကျော်ကြီးလည်း အခန်းထဲ ပြန်ရောက်ပြီး ရေချိုး အဝတ်အစားလဲပြီးတဲ့အချိန် ဒေါက်.. ဒေါက်.. ဒေါက်.. နဲ့ တံခါးမှာ လူတယောက်.. ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ နှင်းအိ.. ရေစိုစိုနဲ့.. “ဟာ.. နှင်းအိ.. ရေမချိုးရသေးဘူးလား.. အအေးပတ်ကုန်မှာပေါ့..” “ဟိုဘက်အခန်းမှာ ဒေါ်ဖြူဖွေးတယောက် မပြီးနိုင်သေးဘူးလေ.. ငါလည်း ချမ်းလာတာနဲ့ နင်ပြီးလောက်ပြီထက်ပြီး နင့်အခန်းထဲမှာ ရေလာချိုးမလို့.. ရမလား” “ရတာပေါ့.. လာ.. ” အဲ့လိုနဲ့ ကျော်ကြီးရဲ့ အခန်းထဲမှာ နှင်းအိက ရေချိုးဖြစ်သွားတာပေါ့… တကယ်တော့ နှင်းအိက ဇာတ်လမ်းရှာတာ.. ။
နှင်းအိက ကျော်ကြီးကို ကြိုက်နေတာ.. ဒါပေမယ့် ကျော်ကြီးက ဖြူဖွေးကို ကြိုက်နေရော.. အဲ့ဒါကို နှင်းအိက ကျော်ကြီးကို သူ့ဆီကို စိတ်လည်လာအောင်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ကျော်ကြီးဆီမှာ ရေလာချိုးတာ.. နှင်းအိ ရေချိုးပြီးလို့ အပြင်ထွက်လာခါနီးမှာ ထမီကို လျော့လျော့လေး ဝတ်ထားခဲ့တာ.. ကျော်ကြီးအရှေ့ကို ရောက်ရင် ချော်လဲအောင် လုပ်လိုက်ပြီးရင် သူရဲ့ နုနုထွားထွား ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ ကျော်ကြီးကို အပိုင်ကြံမယ်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပေါ့.. ခက်တာက သူလည်း ရေချိုးခန်းထဲကနေ ထွက်လာရော.. ကျော်ကြီးက အခန်းထဲမှာ မရှိတော့ဘူး.. နှင်းအိတို့ ၂ယောက် နေမယ့်အခန်းထဲမှာ ကျော်ကြီးက ဖြူဖွေးနဲ့ စကားပြောနေကြတာကို ကြားတော့ နှင်းအိခမျာ ဝမ်းနည်းသွားရှာတယ်…. ကျော်ကြီးကတော့ သူချစ်တဲ့ကောင်မလေး ဖြူဖွေးနဲ့ စကားစမြည်တွေ ပြောပြီး ပျော်နေလေရဲ့.. ။
အားလုံးအဝတ်အစားတွေလဲပြီးတာနဲ့ ၃ယောက်သား ညစာအတူတူသွားစားကြတာပေါ့…. ညစာ စားပြီးတာနဲ့ ကမ်းခြေမှာ မီးဖိုပြီး စကားတွေ ပြောကြ.. သောက်ကြပေါ့.. ကျော်ကြီးကတော့ အရက်လေးနဲ့.. ကျန်တဲ့ ၂ယောက်ကတော့ ဝိုင်နဲ့ပေါ့.. ပျော်မြူးနေလိုက်ကြတာ… ည အိပ်ချိန်ရောက်တော့ ကျော်ကြီးက မူးနေတဲ့ ဖြူဖွေးနဲ့ နှင်းအိကို အခန်းထဲပို့ပေးပြီးတော့ သေသေချာချာ အိပ်ယာပြင်ဆင်ပြီး ၂ယောက်လုံးကို အိပ်ယာပေါ် ချပေးလိုက်တာပေါ့… ကျော်ကြီးက ဖြူဖွေး အိပ်နေတာလေးကို ကြည့်ပြီး စိတ်က မရိုးမရွတွေ ဖြစ်လာပြန်ရော.. လက်တွေက အငြိမ်မနေနိုင်တော့ဘဲ ဖြူဖွေးရဲ့ ရင်နှစ်မွှာကို ပွတ်နေမိလိုက်တယ်… အင်္ကျီကြယ်သီးကလည်း တလုံးက ပြုတ်နေတော့ အင်္ကျီကြားထဲ လက်ထည့်လိုက်တာနဲ့… အိုးးးး… အိနေပါ့လား.. ဆိုတဲ့အတွေး ကျော်ကြီးဆီ ရောက်တာနဲ့ သူ့ရဲ့ လပြွတ်ဝမှာ လရည်တွေက စို့လာ… အင်္ကျီကြယ်သီးကို မသိမသာချွတ်ပေးပြီး ဖုံးကွယ်နေတဲ့ နို့ ၂လုံးကို ဘော်လီကြားကနေ ထွက်လာအောင် လုပ်ပြီးတာနဲ့.. ကျော်ကြီးတယောက် မျက်လုံးအတိုင်းသား ပြူးသွားပြီး.. ။
အိုးးး.. ရက်ရက်စက်စက် လှလှချည်လား ဆိုပြီး နာမည်နဲ့လိုက်အောင် ပန်းရောင်သန်းပြီး ဖြူဖွေးလုံးအိနေတဲ့ ဖြူဖွေးရဲ့ နို့တွေကို ကျော်ကြီးတယောက် လျှာနဲ့ လျက်ပေးနေမိလိုက်တယ် ဘယ်ဘက်နို့ကို စို့ပေးလိုက်.. ညာဘက်နို့ကို လက်မလေးနဲ့ ချေလိုက် လုပ်ပေးနေတယ်.. အဲ့လိုနဲ့ ညာဘက်လက်က ဖြူဖွေးရဲ့ အောက်ကို ဆင်းသွားရင်း ဖြူဖွေးရဲ့ စောက်စိကို လိုက်စမ်းတော့ ပါးလွှာလှတဲ့ အတွင်းခံ ဘောင်းဘီလေးကို စ စမ်းမိလိုက်တယ်… စောက်မွှေးတွေကို အသာအယာပွတ်ပေးရင်း ဖြူဖွေးရဲ့ စောက်စိကို စမ်းမိလိုက်တော့…
ဟင်းးးး အိနေပြန်ပါရောလား.. ကျော်ကြီးအနေနဲ့က တခါမှ အပြင်မှာ ကြုံဖူးတာ မဟုတ်ဘူး.. အမြဲတမ်း အောကားတွေပဲ ကြည့်.. ကိုယ့်ဘာသာကို ဂွင်းထုခဲ့တာ.. အခုတော့ အပြင်မှာ တကယ်အကောင်အထည် ဖော်မိပြီဆိုပြီး ရင်တွေ တလှပ်လှပ်နဲ့.. အဲ့လိုနဲ့ ဖြူဖွေးရဲ့ စောက်စိကို သေချာကိုင်ပေးရင်း အကွဲကြောင်းတလျောက်ကို ဖိကာ ပွတ်မိနေတယ်… အရည်တွေ အရမ်းရွှဲပြီး ထွက်လာတာကို ကျော်ကြီး စမ်းမိလိုက်တယ်… ဖီးလ်တက်နေတဲ့ကျော်ကြီးက စိတ်ကို မထိန်းနိုင်တော့ဘဲ လက်ချောင်း တချောင်းကို အထဲကို ထိုးထည့်ကြည့်မိလိုက်တယ်… ။
အဲ့အချိန် ဖြူဖွေးက အိပ်နေရင်းကနေ အသိဝင်လာပြီး ရွစိရွစိတွေ ဖြစ်လာပါလေရော… ထလိုက်တဲ့အခါကျရင် ကျော်ကြီးလည်း အရှက်ရသွားမယ် အိပ်နေတဲ့ နှင်းအိလည်း နိုးမှာစိုးရိမ်တာနဲ့ မျက်လုံးမှိတ်ပြီးပဲ ငြိမ်ခံနေလိုက်တော့တယ်… ကျော်ကြီးရဲ့ လက်ကတော့ ဖြူဖွေးရဲ့ စောက်ပေါက်ဝထဲကို ထည့်ပြီး မွှေပေးနေတော့ ဖြူဖွေး နိုးနေတာလား အိပ်နေတာလားဆိုတာကိုတောင် မရိပ်မိနိုင် ဖြစ်သွားလေရဲ့ ဖြူဖွေးကတော့ ပါးစပ်ကနေတော့ တအင်းအင်းးး ပေါ့.. ကျော်ကြီးက ဖြူဖွေးရဲ့ လက်တဖက်ကို ကိုင်ပြီး သူ့ရဲ့ ထိုးထောင်ထွက်နေတဲ့ လီးကို ဖြူဖွေးက လာကိုင်နေတယ်ဆိုတဲ့ အမှတ်နဲ့ ပွတ်ပြီးကိုင်ခိုင်းနေတယ်…
ဖြူဖွေးရဲ့ လက်က ကျော်ကြီးရဲ့ လီးတံကို ကိုင်မိလိုက်တဲ့အချိန် ဖြူဖွေးက မနေနိုင် မထိုင်နိုင်တွေဖြစ်ပြီး ဘာဆက်လုပ်ရမှန်း မသိတော့ဘူး… လှုပ်လို့ကလည်း မရတာနဲ့ သူခိုင်းရာ လုပ်နေမိပြီ… အဲ့လိုနဲ့ ကျော်ကြီးက ဖြူဖွေးလက်ကိုကိုင်ပြီး သူ့လီးတံကို သူ ဂွင်းတိုက်နေမိလိုက်တာ တချီပြီးသွားလေရဲ့.. ဒါပေမယ့် သူ့ခမျာ စိတ်က မကျေနပ်နိုင်.. ဖြူဖွေးရဲ့ အဖုတ်လေးထဲကို ထည့်ချင်နေခဲ့တာ.. ဒါပေမယ့်လည်း ဖြူဖွေးကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပြီးမှပဲ ထည့်တော့မယ်ဆိုပြီး ကျော်ကြီး ကိုယ့်အခန်းထဲကိုယ် ပြန်သွားလေရဲ့.. ကျော်ကြီး လုပ်သွားတဲ့လုပ်ရပ် အကုန်လုံးကို နှင်းအိက အိပ်ချင်ယောင်ဆောင်ပြီးနေလိုက်တာ.. အကုန်မြင် အကုန်ကြားလိုက်ရတော့ နှင်းအိရဲ့ အဖုတ်မှာလည်း အရည်တွေရွှဲလို့..။
ကျော်ကြီး အခန်းအပြင်ထွက်သွားပြီး သိပ်မကြာဘူး နှင်းအိကလည်း အိပ်နေရာကနေ ထပြီး ကျော်ကြီးနေတဲ့အခန်းကို လိုက်သွားဖြစ်ပြန်ရော.. ကျော်ကြီး တံခါးဖွင့်ပေးတာနဲ့ နှင်းအိကလည်း အတင်းတိုးဝင်ပြီး ကုတင်ပေါ်ကို နှစ်ယောက်သား ပစ်လှဲလိုက်ကြတယ်… အဲ့အချိန် နှင်းအိက ကျော်ကြီးရဲ့ လီးတံကို ဘောင်းဘီအပေါ်ကနေ ပွတ်ပေးနေတယ်… ကျော်ကြီးက အံ့သြသွားပြီး… “နင် ဒါ ဘာလုပ်တာလဲ” လို့ မေးတော့ “ငါက နင့်ကို ချစ်ချင်တာ.. နင်လည်း အရမ်းလုပ်ချင်နေတယ်မလား.. ငါ အရမ်းချစ်ချင်နေတယ်ဟာ..” ဆိုပြီး နှင်းအိက ပြန်ပြောလိုက်ရော.. အဲ့အချိန် ကျော်ကြီးကလည်း သူ မူးနေလို့ ပြောတာ နေမှာပါ.. ငါ အခုလုပ်လိုက်ရင်လည်း မနက်ကျရင် သူ မှတ်မိချင်မှ မှတ်မိမှာ.. အခုလက်ရှိ ငါ့လီးကလည်း တောင်နေတော့ အတော်ပဲ.. ဆော်လိုက်အုံးမှ.. လို့ စဉ်းစားပြီး ချော်လဲရောထိုင် လုပ်မိလိုက်ရော.. နှင်းအိက ကျော်ကြီးရဲ့ ဘောင်းဘီအောက်က လီးတံကြီးကို ကိုင်ပြီး အထက်အောက် ပုံမှန်ကစားပေးနေတာပေါ့…
ကျော်ကြီးကလည်း အရှိန်ပြန်တက်လာတာနဲ့ ဘောင်းဘီကို ဖြုတ်ပေး ဇစ်ကို ဖြုတ်ပေးပြီး နှင်းအိရဲ့ လက်ကို ကိုင်ပြီး ကျော်ကြီးရဲ့ လီးတံကြီးကို ကိုင်လို့အဆင်ပြေအောင် ထည့်ပေးနေ၏… နှင်းအိကတော့ ပုံမှန်အတိုင်းပဲ လီးတံကြီးကို ကိုင်ပြီး အပေါ်အောက် ဆွဲပေးလိုက် ပွင့်အာနေတဲ့ ဒစ်ကို ကိုင်လိုက်နဲ့ပေါ့… ကျော်ကြီးကတော့ အေးဆေး ဇိမ်ခံနေရင်း နှင်းအိက ကျော်ကြီးရဲ့ ခါးအောက်နားကို ဆင်းသွားပြီး ကျော်ကြီးရဲ့ လီးတံကြီးကို ကြည့်နေလေ၏.. အဲ့အချိန် နှင်းအိက သူ့ရဲ့ ပါးစပ်နဲ့ ကျော်ကြီးရဲ့ ဒစ်ကို ငုံလိုက်တဲ့အချိန်… ကျော်ကြီးခမျာ ကြက်သီးဖျင်းဖျင်းထသွားပါလေရော…. တခါမှ မရဖူးတဲ့အရသာ.. တခါမှ မရဖူးတဲ့ခံစားချက်မျိုး ရလိုက်တော့ ကျော်ကြီးတယောက် နတ်ပြည်ရောက်သွားတဲ့အတိုင်းပဲ..။
ကျော်ကြီးကတော့ ပါးစပ်ကနေ တရှူးရှူး… တရှူးရှူးနဲ့ပေါ့.. နှင်းအိကတော့ ကျော်ကြီးရဲ့ လီးတံကြီးကို ပါးစပ်ထဲထည့်လိုက်.. ထုတ်လိုက် လုပ်နေတာ.. လီးကို အရင်းက ကိုင်ပြီး ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ် အားရပါးရလုပ်ပေးနေသည်.. ဖင်ကြားထဲတွင် တွဲလောင်းကျနေသော လအုကို အသာအယာ သူမလက်နှင့်ကိုင်ပြီး အု ၂လုံးကို လက်ထဲမှာ ဆုတ်နယ်ကစား၍ နေသည်.. ခဏအကြာမှာ လအုနှစ်လုံးကို နှင်းအိက သူ့ပါးစပ်ထဲ ငုံထည့်လိုက်တော့… အိုးးးး…. ကောင်းကင်ဘုံသို့ ရောက်သွားသည့်အလား… ကျော်ကြီးတယောက် တကိုယ်လုံး တဖျင်းဖျင်းဖြစ်လာပြီး လီးက ဆတ်ကနဲ ဆတ်ကနဲ အစွမ်းကုန်တောင်သွားရာကနေ သုတ်ရည်တွေ သူမ ပါးစပ်ထဲ ပန်း၍ ထွက်သွားလေသည်.. နှင်းအိတာဝန်ကျေတော့ ကျော်ကြီးက နှင်းအိကို သူ့အပေါ်ကနေ ဖယ်.. ပက်လက်လှန်ချပြီး နှင်းအိ ဝတ်ထားတဲ့ ထမီကို ဆွဲဖယ်လိုက်တဲ့အချိန်.. နှင်းအိကလည်း အသင့်ကားပေးထားတဲ့ ပေါင်များနဲ့အတူ စောက်ဖုတ်လေးပါ အသာပြဲ၍ ဟသွားလေသည်.. ကြမ်းရှရှ အမွှေးလေးများ အုပ်ဆိုင်းဆိုင်းဖြစ်နေသော စောက်ဖုတ်လေးသည် နူးညံ့လွန်းလှသည်။
ဖိလိုက်ရင် နစ်သွားပြီး ကြွလိုက်လျှင်လည်း ပြန်ပြီး ဖောင်းလာသည်။ ကြီးမားကားစွင့်သော တင်ပါးကြီးများကြောင့်လည်း စောက်ဖုတ်လေးသည် ကော့ကော့လေး မို့၍နေသည်။ ကျော်ကြီးက ခုနက ဖြူဖွေးရဲ့ စောက်ဖုတ်ကို ကလိခဲ့ပေမယ့်လည်း ယခုလို သေသေချာချာ မမြင်ခဲ့ရ။ ထို့ကြောင့်လည်း ကျော်ကြီးရဲ့ နားထင်တွင် သွေးတွေက တဒိတ်ဒိတ်ခုန်၍ လာရသည်။ အမွှေးကြမ်းတွေကြားကနေ မာနေသော နှင်းအိရဲ့ စောက်ဖုတ်ထဲ လက်ခလယ်ကို စမ်းပြီး ထိုးသွင်းလိုက်သည်။ ခုနက ကျော်ကြီးက ဖြူဖွေးကို လုပ်ပေးနေတဲ့အချိန် မြင်ခဲ့ရတာတွေကြောင့် နှင်းအိရဲ့ စောက်ဖုတ်မှာ အရည်ရွှဲနေသဖြင့် နူးညံ့ချောအိသော အသားစိုင်လေးများထဲသို့ လက်ခလယ်သည် ရှောရှောရှုရှုဝင်၍သွားသည်။
ပူနွေး၍ နှစ်သက်စရာ အရသာပင်ဖြစ်သည်.. စောက်စိလေးကလည်း မာပြီး တောင်နေလေသည်.. ထို့နောက် အဖုတ်ထဲသို့ လက်ချောင်းသွင်းပြီး မွှေပေးလိုက်ပါတော့သည်.. “အင့်… ဟင်းးးး… ဟင်းးး… ကိုကျော်… အင်းးးး… အိုးးး… ဟင်းးးး…” နှင်းအိကလည်း အရှိန်တွေတက်ပြီး ပေါင်ကို အစွန်းကုန်ဖြဲကားပေးလိုက်ရာ အဖုတ်ကြီးက ပို၍ဖောင်းကားကာ ပြူးပြီးပေါ်လွင်လာရသည်.. “ဟင့်… အင့်… အင့်… အင့်…” ထူးခြားသော အရသာကြောင့် အင့်ကနဲတွန့်သွားပြီးမှ ဘာလုပ်ပေးရမယ်ဆိုတာကို သဘောပေါက်သွားပြီး သက်ပြင်းများချလိုက်သည် .. “ပြွတ်.. ပလပ်.. ပြွတ်..” “အားးး… ရှီးးး… ပြွတ်.. ကျွတ်.. ကျွတ်..” စောက်စေ့က်ု လျှာဖျားနဲ့ ကလိပေးလိုက် စောက်ခေါင်းထဲ လျှာထိုးထည့်ပြီး မွှေပေးလိုက်.. အဖုတ်တပြင်လုံး လျှာနဲ့သိမ်းပြီး လျက်ပေးလိုက်နဲ့ လုပ်ပေးနေတဲ့ ကျော်ကြီရဲ့ လျှာဒဏ်ကြောင့် နှင်းအိတယောက် တကိုယ်လုံး တုန်ခါနေလေသည်.. ။
အရည်တွေကလည်း မရပ်မနား ယိုစီးကျလာပြီး အိပ်ယာပေါ်တွင် အကွက်ကြီးပင် ဖြစ်ပေါ်လာသည်.. လျှာက စောက်စိကို စုပ်ပေးနေသလို.. လက်ချောင်းတွေကလည်း စောက်ဖုတ်ထဲကို ထည့်လိုက်.. မွှေပေးလိုက် လုပ်ပေးနေသည်.. ကျော်ကြီးက အားသွန်ခွန်စိုက်ဖြင့် လုပ်ပေးလိုက်တော့ နှင်းအိတယောက် ပြီး၍သွားသည်.. ကျော်ကြီးကတော့ အဆက်မပြတ် စောက်စိကို စုပ်ပေးလိုက် စောက်ခေါင်းထဲထည့်လိုက်…နဲ့ လုပ်လိုက်ရင်း နောက်ထပ်တကြိမ် ထပ်ပြီးသွားပြန်လေသည်.. ဒီတကြိမ်မှာတော့ ငယ်သံပါအောင် အော်ရင်း လရည်ဖြူတွေကိုပါ ထုတ်လိုက်ပါတော့သည်..
ကျော်ကြီးက အသင့်ဖြဲထားတဲ့ နှင်းအိရဲ့ ပေါင်နှစ်လုံးကြားသို့ ဝင်လိုက်ပြီး စိနေသော စောက်ဖုတ်လေးကို လက်ဖြင့်အသာအယာဖြဲပြီး ဒစ်ဖျားဖြင့် စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသား တလျှောက် ပွတ်သပ်ပေးနေရင်း စိတ်တွေ ထသထက် ထလာအောင် နှိုးဆွပေးနေသည်… ထို့နောက် ကျော်ကြီး၏ ဧရာမလီးချောင်းကြီးက စောက်ခေါင်းထဲသို့ မဆန့်မပြဲ ဝင်သွားရှာသည်.. ကျော်ကြီးရဲ့လက်က နှင်းအိရဲ့ လုံးအိနေတဲ့ နို့တွေကို ကိုင်ရင်း စိတ်ကြွအောင် ကစားပေးနေမိသည်.. ကျော်ကြီးရဲ့ လီးကြီးကလည်း လက်နဲ့အတင်း ညှစ်ညှစ်ထားသလို ခံစားနေရသည်..။
ကျော်ကြီးရဲ့ လီးတံကြီးက ထင်သလောက် မဝင်သေး.. တခုခုခံနေသည်ဟု ခံစားနေရသည်.. အာာ.. အပျိုမြှေး.. ဟုတ်ပါသည်.. နှင်းအိရော ဖြူဖွေးရော နှစ်ယောက်လုံး ပါကင်မဖောက်ရသေးတဲ့ အပျိုလေးတွေပါ..ဲ့အချိန် ကျော်ကြီးတယောက် စိတ်မထိန်းနိုင်ဘဲ အတင်းဇွတ်တိုးပြီး လီးတံ တဆုံး ထည့်ပြီး ငြိမ်နေလိုက်လေသည်.. “အိုးးးး.. အာာာာ… ပြွတ်… ” လီးတံကြီးတခုလုံး နွေးနေပါရောလားး… ခဏကြာအောင် အသွင်းအထုတ် ဖြေးဖြေးစီ လုပ်ပေးလိုက်မှ သူမ၏ စောက်ပတ်ကြွက်သားလေးများ တဖြေးဖြေး ပြေလျှော့၍ကျလာသည်.. “ပြွတ်… အား…. အင့်…. သိပ်ကောင်းတာပဲ… အားးး… ” အခုထိ ကောင်းနေသော နှင်းအိ၏ ခြေထောက်များကို ပခုံးပေါ် ထမ်းတင်ပြီး ရှေ့ကို ငိုက်ချလိုက်ပါသည်.. ။
ခါးအောက်မှာ ခေါင်းအုံးတွေ ခံထားလိုက်တော့ နှင်းအိတယောက် လီးရဲ့ ဆောင့်ချက်တိုင်းကို မလွဲနိုင် မရှောင်နိုက် ရက်ရက်စက်စက်ကို ခံနေရပါတယ်.. နှင်းအိခမျာ.. နှုတ်ခမ်းကို ကိုက်ပြီး လက်က မွေ့ယာကို ကုတ်ခြစ်ရင်း ခေါင်းကို ဘယ်ညာ ခါယမ်း၍နေလေသည်.. သူမ၏ ပေါင်အတွင်းသားတွေ တဆတ်ဆတ် တုန်ခါ၍နေသလို နို့အုံတွေကလည်း ပြုတ်ထွက်မတတ် လှုပ်ရမ်း၍နေသည်.. စောက်ခေါင်းထဲက ချောအိအိအသားမျှင်များသည် လီးကို စုပ်ယူ၍ နေကြသည်.. နှင်းအိရဲ့ ခါးကို ကိုင်ကိုင်ပြီး ဆောင့်ရာမှ စောက်ဖုတ်ပါ အထဲကို ကျွံဝင်သွားသလား အောက်မေ့ရအောင် လအုတွေပင် စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းကြား ညပ်ညပ်သွားလေသည်.. မကြာခင်မှာပဲ.. ဗြုံးဆို ပြေလျှော့သွားပြီး အဖုတ်တခုလုံး လရည်တွေ အိုင်ထွန်းနေတော့သည်.. ကျော်ကြီးလည်း ရွှဲနေသော စောက်ခေါင်းထဲကို ဆယ်ချက်လောက် ဆက်ဆောင့်ရင်း စောက်ပတ်ရဲ့ စုပ်အားကို မခံနိုင်တော့ဘဲ သားအိမ်နံရံကို သုတ်ရည်များဖြင့် တဖြန်းဖြန်း ပန်း၍ ပြီးသွားရပါတော့သည်….။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged စုပျအားကိုမခံနိုငျ